fourth - Synonyms of fourth | Antonyms of fourth | Definition of fourth | Example of fourth | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for fourth
Top 30 analogous words or synonyms for fourth
စွန့်ဦးတီထွင်သူ ထို့ကြောင့် စွန့်ထွင်ဦးစီးတစ်ယောက်၏ အမြတ်များစွာရရှိအောင် လုပ်ကိုင်နိုင်မှုသည် ၎င်းအားစတုတ္ထမြောက်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားစု (လုပ်အား၊ မြေယာ၊ အရင်းအနှီး)အပြင်Fourth Factor ဟု လက်ခံလာစေပါသည်။
ကေအမ်ဒီ No.15, Fourth Fl., Corner of Insein Road & U Tun Lin Chan St., Kamayut Tsp., Yangon.
ဒိုမိန်းအမည် fourth level fifth-level စသည် အကန့်အသတ်မရှိ ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ level5ခု ပါတဲ့ domain တစ်ခုကို ဥပမာပေးရရင်" www.sos.state.oh.us" ပါ။ level တစ်ခုစီကို အစက် (dot) (သို့မဟုတ်) ပုဒ်ဖြတ်သင်္ကေတ (period symbol) တစ်ခုစီနဲ့ ခြားထားပါတယ်။
ဟဲဗီးမက်တယ်လ် ဂီတ perfect fifth interval သည် power chord အတွက် အများဆုံးအခြေခံဖြစ်သော်လည်း power chord များမှာ ကွဲပြားသော interval များတွင် အခြေခံ ၍ minor third, major third, perfect fourth, diminished fith, သို့မဟုတ် minor sixth ဟူ ၍ရှိသည်။ power chord များသည် fretboard ပေါ်တွင် လူးလားပြန်ခတ်တီးခတ်ကြသည်။
ဆိုယုဇ်အာကာသယာဉ် The Soyuz-TM crew transports (M: модифицированный, "Modifitsirovannyi" meaning modified) were fourth generation Soyuz spacecraft, and were used from 1986 to 2003 for ferry flights to Mir and the International Space Station.
ဂျီချန်ဝု ၂၀၁၇ ၌ အက်ရှင်ဇာတ်ကား ဖြစ်သော "လံကြုပ်မြို့ကြီး "၌ အလုပ်မရှိသော ဂိမ်းစွဲနေသူတဦး ဘဝမှ နာမည်ကြီးလူသတ်သမား ဖြစ်လာပုံ သရုပ်ဆောင်သည်။ နောက်ထပ်ရိုက်ကူးသည့် အက်စ်ဘီအက်စ်၏ ရို-ဟာ-ဖို ဇာတ်လမ်းတွဲ ဒီမိန်းမကို စောင့်ကြည့်ထား သည် မေလ၌ အစမ်းပြရန် စီစဉ်ထားသည်။ (Ji is also set to star asareckless rookie constable alongside Sol Kyung-gu's apathetic veteran officer in the period-comedy film Two Constables, the fourth installment in the Two Cops franchise directed by Kang Woo-suk...)
ရှိန်းကျိန့်မြို့ Adjacent to Hong Kong, Luohu is the financial and trading centre of Shenzhen. Futian, at the heart of the SEZ, is the seat of the Municipal Government. West of Futian, Nanshan is the centre for high-tech industries. Formerly outside the SEZ, Bao'an and Longgang are located to the north-west and north-east, respectively, of central Shenzhen. Yantian is the location of Yantian Port, the second busiest container terminal in mainland China and the fourth busiest in the world.
ရှိန်းကျိန့်မြို့ In 2010, the GDP reachedarecord high of 951 billion yuan, an increase of 10.7% over 2009. Shenzhen's economic output is ranked fourth among the 659 Chinese cities (behind Beijing, Shanghai and Guangzhou), and it is comparable to that ofamedium sized province in China. In 2010, Shenzhen's GDP per capita was 95,000 yuan (US$14,615), making it one of the richest of all Chinese cities.